कता हराए शिशिर भण्डारी ? ४० दिनदेखि अष्ट्रेलियामा यस्तो अवस्थामा रहेछन् (भिडियो हेर्नुस) – Sandes Post
May 10, 2022 1537
शिशिर भण्डारीको लोकप्रिय यस च्यानलमा किन भिडियो आएन ? यसका सन्चालक कलाकार तथा सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी कहाँ हराए ? शिशिरलाई हिजो आज सामाजिक सन्जालमा यस्तै प्रश्नहरु आउने गर्दछन् । वास्तवमा शिशिर यतिबेला अष्ट्रेलियामा छन् । उनी एक साँगितिक कार्यक्रमका लागि मार्च १८ मा अष्ट्रेलियामा गएका थिए । त्यसपछि कार्यक्रमहरुको चाप बढेपछि बिगत ४५ दिनभन्दा बढि देखि उनी उतै छन् । शिशिर यहि मे १९ मा नेपाल फर्कदैछन् ।
Prevबालेनलाई जिताउन काठमाडौंको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका आनन्द जोशीद्वारा घरदैलो कार्यक्रम बन्द
Nextमतदाता परिचय पत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने